» Journey-Assist - Izay ilainao rehetra
Tongasoa eto amin'ny vavahadin'ny dia Journey-assist!
Ny tanjonay dia ny hanampy anao amin'ny fikarakarana mahaleo tena Tsangatsangana! Na asa na fitsangatsanganana fampianarana, fitsidihana ara-pinoana, fitsangatsanganana fivarotana, fizahan-tany na fitsangatsanganana fotsiny ho an'ny tanjon'ny fialan-tsasatra. Eto ianao no hahita ny fampahalalana rehetra ilainao momba izany. Manomboka amin'ny sarintany ifanakalozana miaraka amin'ny mahasarika ary mifarana amin'ny torohevitra sy ny hevitra momba ireo mpizahatany za-draharaha, miaraka amin'ny tatitra momba ny sary sy ny horonan-tsary.
Ao amin'ny vavahadin-tserasera koa ianao dia afaka mahita fampahalalana ilaina be dia be momba ny firenena maro, ny manintona ary ny zavatra mahaliana hafa ao aminy.
Ho an'ny fifandraisana manokana, manome fotoana ny vavahady avoaka ny lahatsoratrao, zarao ny toro-hevitra sy ny hacks amin'ny fiainanao, avelao ny hevitrao sy ny tantaran'ny dia.
Fampahalalana momba ny fikarakarana dia tsy miankina
Toerana fitsangatsanganana malaza indrindra
Lahatsoratra navoaka eto voasoratra anarana mpitsidika ny vavahadinay. Mazava ho azy fa mety hiseho eto koa ny lahatsoratrao na ny fanadihadinao. Lahatsoratra izay misy torohevitra mahasoa, tolo-kevitra, famaritana toerana mahaliana, hevitra sy ny zavatra toy izany. Mazava ho azy, alohan'ny hamoahana, ny lahatsoratra rehetra dia arakaraka ny maha-zava-dehibe ny atiny 🙂
Mba hamoronana ny famoahana anao, mankanesa any amin'ny kaontinao manokana, na kitiho fotsiny ETO 🙂
i Vietnam Laos Таиланд
India Maldives Filipina
Indonezia Shina Sri Lanka
Kambodza Сингапур Japana
Fanontana rehetra momba ny firenena aziatika
Ny faritra 7 tsara indrindra any Torkia Lisitry ny atiny 97 isan-jaton'ny velaran-tanety lehibe any Torkia dia any Azia, miaraka amin'ny telo isanjaton'ny faritany misy azy eo amin'ny Saikinosy Balkan any Eropa atsimo atsinanana, tafasaraka amin'ny sisa amin'ny firenena amin'ny alàlan'ny Bosphorus, ny Ranomasin'i Marmara ary Dardanelles. I Torkia dia sisin'ny ranomasina Aegean, Mainty ary Mediteraneana ary manana morontsiraka tsara tarehy lava. Betsaka ...
Top 10 morontsirak'i Torkia Loha Hevitra ato Anatiny Torkia dia fambolena sy kolontsaina, olona ary sary miavaka. Miaraka amin'i Eoropa Atsinanana amin'ny lafiny iray ary i Azia amin'ny lafiny iray hafa, i Torkia dia namolavola ny tantarany lava teo ambanin'ny fitaoman'ny fanjakana, ny fifamatorana ara-kolontsaina ary ny làlam-barotra mandeha eo aminy. Ny tontolony voajanahary sy ny morontsiraka ...
Ny 10 manintona Istanbul tsara indrindra Tabilao anatiny ao Turkey dia tanàna iray mahomby amin'ny fitehirizana ny kolontsaina sy ny tantarany, mampifangaro azy ireo amin'ny tanàna mahafinaritra izay manana zavatra betsaka hatolotra ny mpandeha eran'izao tontolo izao. Niorina tamin'ny vanim-potoana Neolithic, Istanbul ankehitriny dia tanàna maoderina izay mijanona ho mahatoky amin'ny lovany ara-tantara amin'ny alàlan'ny moskea, basilicas ary ...
Nosy 10 lehibe indrindra any Indonezia Lisitry ny atiny Indonezia no vondrona nosy lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, miaraka amin'ireo nosy rakotra ala tsy latsaky ny 17 miala ny morontsirak'i Azia. Nosy dimy no heverina ho lehibe noho ny habeny, fa ny ambiny kosa dia mizara 000 aripelagos Indonezia kely kokoa. Atolotro ho anao ny nosy 30 lehibe indrindra any Indonezia. folo…
Top amoron-dranomasina 10 any Lombok any Indonezia Lisitry ny atiny Ireo mpitsangatsangana dia tonga any Lombok noho ny antony maro. Mety te hitrandraka ny natiora izy ireo na hianatra bebe kokoa momba ity vondrom-piarahamonina nosy Silamo be mpampiasa ity. Ny sasany maniry fotsiny ny hahita ny morontsiraka tsara indrindra any Lombok, ny filentehan'ny masoandro, ary angamba ny snorkeling, ny antsitrika ary ny onja. Misy ...
Ny lisitry ny atin'ny nosy 10 tsara indrindra any Indonezia Indonezia dia eo anelanelan'ny Oseana Indiana sy Pasifika ary eo ambonin'ny ekoatera. Ity niavaka ity dia manana nosy 17 mahery. Ny nosy malaza indrindra toa an'i Java, Sumatra ary Borneo dia sasany amin'ireo lehibe indrindra eto an-tany, fa ny kely kokoa kosa dia mendrika hitsidika. Na dia tsy…
Fitsangatsanganana any Eropa
Grande-Bretagne Ukraine Repoblika Tseky
Germany Frantsa Soisa
Irlandy Kroasia Gresy
Espaina Montenegro Polonina
Ny famoahana rehetra momba ny firenena eropeana
7 Ny zava-mahatalanjona ao Gresy fahiny Lisitry ny atiny Ao amin'ireo trano taloha mahatalanjona any Gresy, vitsivitsy monja no mbola velona mandraka androany, raha ny hafa kosa nanjavona tanteraka tsy hahita noho ny fahasimbana vokatry ny loza voajanahary na ny tenan'izy ireo ihany. Na ireo trano mbola velona aza dia misy ampahany simba amin'ny ampahany na tanteraka. Maro ny asa fanarenana atao mba hitehirizana ...
Ny lisitry ny zavatra manintona 10 malaza indrindra any Polonina dia tafavoaka tamin'ny fifandonana nandritra ny taonjato maro ary lasa firenena mahaleo tena mirehareha vonona handray andraikitra vaovao amin'ny tantara maoderina. Ireo mpitsidika an'i Polonina dia mahita izay fantatry ny mponina hatry ny ela: Polonina dia firenena manana kolontsaina manankarena, sary mahafinaritra ary toerana ara-tantara tsy mahazatra. Na mijery ianao ...
Toerana tsy dia misy dikany loatra any Gresy Lisitry ny atiny Grika dia fantatra amin'ny maha cradle an'ny sivilizasiôna sy ny demokrasia azy, tsy lazaina intsony ny Lalao Olaimpika fanta-daza. Toerana fizahan-tany tena malaza izy io ary misy toerana malaza indrindra toa an'i Santorini sy Athens. Raha ireo toerana fialan-tsasatra ireo dia feno zavatra mahafinaritra hita sy ...
Kirillovka. Mijanona eo amin'ny Ranomasin'i Azov. Ukraine Lisitry ny atiny Ao anatin'ireo fironana misy eo amin'ny tontolon'ny fitsangatsanganana dia fotoana tokony hijerena akaiky ireo firenena onenanay, fa tsy ny manonofinofy hoe aiza no ahatongavana izao dia tsy azo atao. Ho an'ny mponina any Ukraine, ohatra, misy ny Ranomasina Azov tsara tarehy! Ary raha jereo akaiky azy ao anatiny ...
Nosy 10 lehibe indrindra any Gresy Lisitry ny atiny Sarotra ny milaza marina hoe firy ny nosy miparitaka eran'i Gresy. Tombanan'ireo mpahay jeografia fa mety hisy nosy 1200 ka hatramin'ny 6000 isan-karazany. Na izany aza, ny ankamaroan'izy ireo dia bitika ary mijanona tsy onenana mandritra ny taonjato maro lasa. I Gresy dia fonenan'ny vondrona nosy maromaro, ary ny maro amin'izy ireo dia ao amin'ny Aegean sy ...
Nosy avaratratsinanana atsinanana atsinanana atsinanana. Gresy Lisitry ny atiny Ireo nosy Aegean avaratra atsinanana, miparitaka amoron'ny morontsirak'i Aegean ao Azia Minora, dia mamorona vondronosy iray tsy dia manara-dalàna. Ireo nosy ireo, ny faritra lavitra indrindra amin'ireo nosy grika, dia azon'ny ranomasina sy ny rivotra iavahana ary mendrika izany. Misongadina ireo nosy ireo ...
Ny famoahana rehetra momba ny firenena afrikana
Toeran-kaleha 10 lehibe any Maroc
Toeran-kaleha 10 lehibe ao amin'ny atiny Maraoka Humphrey Bogart sy Ingrid Bergman dia mety nanome an'izao tontolo izao Casablanca, tanàna lehibe indrindra eto amin'ny firenena, fa i Maraoka dia betsaka ny zavatra tsy maintsy jerena ankoatr'ity tanàna be voninahitra ity. Ity zanatany frantsay teo aloha ity dia manome ny mpandeha ny fotoana hiroboka amin'ny fiainan'ny kolontsaina Arabo sy Berber taloha, milentika amoron-dranomasina ...
Ireo toerana tsara indrindra sy mari-tany 10 Maraokana tsara indrindra - TripAdvisor
Lisitry ny atin'ny 10 manintona indrindra an'i Maraoka Ny morontsirak'i Maraoka sy ny endriny mahavariana, miaraka amoron-dranomasina lava, seranan-tsambo manjono, oasis matevina ary ireo tendrombohitra avo Atlas, dia mety hahaliana ny mpandeha. Manampia ireo tanànan'ny fanjakan'ny Fez, Meknes ary Marrakesh, miaraka amin'ny ohatra tsara amin'ny maritrano silamo tany am-boalohany, ary ianao ...
Tora-pasika 10 tsara indrindra any Maroc
Topin'ny tabilao maraokana marobe 10 Ny morontsirak'i Maraoka dia mihazakazaka manaraka ny Oseana Atlantika mankany andrefana ary ny Ranomasina Mediterane any avaratra, izay midika fa misy amoron-dranomasina taonina maro hitsidihana sy hankafizana. Betsaka ny toerana itodiana mahafinaritra ho an'ireo mpankafy sy mpankafy rano ary tsy misy ...
Tempoly ejipsianina taloha 10 mahavariana indrindra
Tempoly ejipsianina taloha 10 mahavariana indrindra Egypt Contents Ny tantara momba ny maritrano egyptiana taloha dia niverina an'arivony taona maro. Ny tempoly ejipsianina taloha indrindra dia namboarina nanodidina ny taonan'ny faha-4 taonina talohan'i Kristy ary rafitra bararata kely fotsiny. Ny tempoly farany, nampiasain'ny egyptiana taloha ho an'ny tanjona kendreny, dia natao tempoly hatramin'ny taonjato faha-6 n ...
Toerana 10 tsara indrindra hitsidihana an'i Namibia
Toerana Top 10 hitsidihana an'i Namibia Lisitry ny atiny Afrika Andrefana Andrefana no misy an'i Namibia, zanatany alemanina teo aloha izay nahazo fahaleovan-tena tamin'ny taona 1990 ihany. Fantatra amin'ny sehatry ny diamondra sy ny kolontsain'ny rora i Namibia, ary koa ny zava-manintona voajanahary mahavariana. Raha toa ny hevitrao momba ny fialan-tsasatra nofinofy dia misy hetsika mavitrika maro ...
Mandehandeha any Amerika atsimo
Faritra tsara tarehy 5 any Brezila
Faritra 5 tsara indrindra any Brezila Lisitry ny atiny Brezila dia goavambe amerikana tatsimo. Io no firenena lehibe indrindra eto amin'ny kaontinanta ary firenena fahadimy lehibe indrindra manerantany. Izy io dia trano misy tanàna malaza sy malaza indrindra eran'izao tontolo izao; toa an'i Rio de Janeiro, ary azon'ny tsirairay an-tsaina an'io tanàn-dehibe malaza amoron-dranomasina io. 5 tsara tarehy indrindra ...
Ireo toerana tsara indrindra sy mari-toerana 10 tsara indrindra any Bolivia - TripAdvisor
Lisitry ny zavatra manintona 10 ao Bolivia Bolivia dia iray amin'ireo firenena avo indrindra sy lavitra indrindra eto an-tany, izay mbola tsy voakitikitiky ny fotoana ny ankamaroany. Bolivia no fonenan'ny vazimba teratany betsaka noho ny firenena hafa rehetra any Amerika. Ho an'ny mpandeha, Bolivia dia manolotra fifangaroana traikefa ara-kolotsaina iraisampirenena, velaran-tany voajanahary tsara tarehy ary fisehoan-javatra tafahoatra. Azoko an-tsaina ...
Toerana 10 tsara indrindra hitsidihana any Ekoatera
Toerana 10 tsara hitsidihana any Ekoatera Nomena anarana taorian'ny ekoatera izay mivezivezy manerana ny firenena, i Ekoatora dia firenena manolotra zavatra ho an'ny rehetra. Manomboka amin'ny morontsiraka iray kilaometatra sy sasany ny morontsiraka misy morontsiraka mahafinaritra, ary avy eo hatrany Andes sy ny ala mando amin'ny fantsakan'ilay renirano feno indrindra eran'izao tontolo izao - ...
Mandehandeha any Amerika Afovoany sy Amerika Avaratra
Lisitry ny fizahan-tany mpizahatany 10 lehibe any Belize Alao sary an-tsaina ny firenena misy morontsiraka tropikaly, haran-dranomasina, fiforonan'ny zohy, bibidia hafakely ary firoboroboan'ny Caribbean Ary manamorona ny morontsirak'ity firenena ity no vatohara faharoa sakana lehibe indrindra manerantany, ary ny sisa tavela amin'ny tempoly taloha dia miparitaka manerana ny ala mikitroka ao aminy. Raha mieritreritra ianao fa firenena toy izany ...
Toerana 10 mahaliana indrindra any Costa Rica
Eo anelanelan'ny Nikaragoà sy Panama, Costa Rica dia mirehareha amin'ny zavamaniry sy zavamaniry avo indrindra eto an-tany, ankoatry ny karazan-tendrombohitra, lohasaha, ala, volkano, morontsiraka, farihy ary renirano. Ny fitsangatsangana an'io dia tsy mamela olona tsy hiraharaha. Ity ny naotiko ho an'ireo 10 mahaliana indrindra ...
Mandehandeha any Aostralia sy Oseania
Farihy 12 tsara tarehy indrindra any Nouvelle Zélande
12 amin'ireo farihy kanto indrindra any Nouvelle Zélande Misy atiny hita ao amin'ny Oseana Pasifika atsimo atsinanan'i Aostralia, i Nouvelle-Zélande dia misy nosy lehibe roa ary malaza amin'ny tendrombohitra avo sy ny tontolo voajanahary mahavariana. Ny ankamaroan'ny tany amin'ireo nosy dia ny faritry ny valan-javaboary, indrindra ny amin'ny South Island, izay saika ny morontsiraka andrefana rehetra manamorona ...
30.10.2020 / rem / Aostralia sy Oceania, New Zealand / fanehoan-kevitra amin'ny farihy 12 tsara tarehy indrindra any Nouvelle Zélande tsy misy
Dia fitsangatsanganana 7 tsara indrindra avy any Queenstown Novely zelandy
Ny dia lavitra 7 tsara indrindra avy any Queenstown New Zealand Table of Contents Queenstown dia tanàna fialantsasatra kely any Nouvelle Zélande izay miorina amoron'ny Farihin Wakatipu ary mirehareha amin'ny fahitana ireo tendrombohitra feno rakotra lanezy. Tsy ela akory izay, dia toerana fanaovana ski io ​​no tena nahafantarana azy, fa ankehitriny niova tanteraka ny toe-javatra ...
29.10.2020 / rem / Aostralia sy Oceania, New Zealand / fanehoan-kevitra amin'ny dia 7 andro ambony avy any Queenstown. Novely zelandy tsy misy
Faritra 16 tsara indrindra any Nouvelle Zélande
Faritra 16 tsara indrindra any Nouvelle Zélande Lisitry ny atiny Iray amin'ireo firenena tsara tarehy indrindra eto an-tany, i Nouvelle-Zélande ao Oseania dia feno zava-manintona voajanahary mahavariana. Volkano marobe sy tampon-tendrombohitra maro no miakatra ambonin'ny morontsiraka lava sy mahafinaritra miaraka amin'ny lohasaha mahavokatra, farihy sy renirano mamirapiratra mamakivaky ity tany voatso-drano ity.
29.10.2020 / rem / Aostralia sy Oceania, New Zealand / fanehoan-kevitra amin'ireo faritra 16 tsara tarehy indrindra any Nouvelle Zélande tsy misy
Zavatra mahafinaritra 10 hatao any Napier. Novely zelandy
Zavatra mahafinaritra 10 hatao any Napier. New Zealand Lisitry ny atiny Ny tanàna kely any Napier any amin'ny Nosy Avaratra, miorina eo amin'ny morontsiraka atsinanan'i New Zealand izay mijery ny Oseana Pasifika, dia toerana tena tsara sy mahaliana ho an'ny fialamboly mahafinaritra. Napier, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe "renivohitra Art Deco an'izao tontolo izao", dia feno trano mahafinaritra izay mampiseho endrika maritrano miavaka; Bebe kokoa ...
27.10.2020 / rem / Aostralia sy Oceania, New Zealand / fanehoan-kevitra fandraketana hetsika mahaliana 10 any Napier. Novely zelandy tsy misy
Zavatra 9 tsara indrindra hatao any Nelson. Novely zelandy
Zavatra 9 tsara indrindra hatao any Nelson. Ny tabilao anatiny ao Nouvelle-Zélande Niorina teny amoron'ny morontsirak'i Tasman, ny tanànan'i Nelson dia nipetraka tao amin'ny faritra tsara tarehy mahafinaritra an'i New Zealand, voahodidin'ny valan-javaboary telo mahatalanjona. Ny tanàna tranainy indrindra ao amin'ny firenena, ity tanàna ity dia naorin'ny Lord Admiral Nelson tamin'ny 1841, ary avy eo nomena ny anarany. Ilay tanàna, anaram-bosotra feno fitiavana ...
27.10.2020 / rem / Aostralia sy Oceania, New Zealand / fanehoan-kevitra amin'ny zavatra 9 tsara indrindra hatao any Nelson. Novely zelandy tsy misy
Fitsangatsanganana 9 andro tsara indrindra avy any Auckland Novely zelandy
Fitsangatsanganana 9 andro tsara indrindra avy any Auckland New Zealand Contents Auckland, tanàna lehibe indrindra any Nouvelle Zélande, be dia be no azo atolotra. Io no fonenan'ny mponina Polineziana be indrindra eto an-tany. Izy io dia miorina amin'ny saha volkano basalt mavitrika - ilay tanàna tokana eto amin'izao tontolo izao. Manana tranombakoka tena tsara izy, ny marina lehibe indrindra amin'ny hemisphere atsimo ary ...
27.10.2020 / rem / Aostralia sy Oceania, New Zealand / fanehoan-kevitra Fitsangatsanganana 9 isan'andro tsara indrindra avy any Auckland. Novely zelandy tsy misy
Valan-javaboary 12 tsara indrindra any Shina Lisitry ny votoatin'ny valan-javaboary angamba tsy ny zavatra voalohany tonga ao an-tsainao rehefa mieritreritra an'i Shina ianao. Na izany aza, ity firenena ity dia manana valan-javaboary 200 tsy manam-paharoa. Tao anatin'izay taona faramparany izay dia nanao ezaka tokoa ny governemanta sinoa hanitarana ny rafitry ny valan-javaboary. Hatao indrindra hanonerana ny fandotoana, ...
Top 10 toerana mahatalanjona indrindra ao atsinanan'i Sina Atsinanana dia tontolony manokana. Manana tantara manan-karena izy, misy tanàna sasany mihoatra ny 6000 taona. Nandritra ny taonjato maro, atsinanan'i Sina dia namorona atmosfera izay mampitony sy mampiala ny fanahy. Mamporisika ny sainao rehetra i Sina Atsinanana: avy amin'ny tanàna be rano, mamaky lakandrano feno mihetsika miadana ...
Top 10 toerana mahatalanjona indrindra any China Avaratra Lisitry ny atiny Ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina dia firenena midadasika sy maro karazana. Noho ny habeny dia tsy azo atao ny mahita azy rehetra amin'ny dia iray, fa misy fahitana mahaliana manerana ny firenena. Sina Avaratra no safidy tsara indrindra ho an'ireo mpandeha voalohany. China China no toerana hahitanao ...
Toerana 10 mahavariana indrindra any atsimon'i China Lisitry ny atiny Sina sy Etazonia dia mitovy habe amin'ny tany mitovy aminy, saingy i Sina dia manana olona iray tapitrisa lavitrisa. Mety ho sarotra ny mitety an'ity firenena midadasika ity. Fa ho lasa mora kokoa kokoa izany raha zarainao am-pahataperana kely ity firenena ity arakaraka ny ...
Zava-misy tsy fantatra momba ny Great Wall of China Great Wall of China. Iray amin'ireo zava-mahatalanjona vaovao eto amin'izao tontolo izao Ny rindrin'ny Great China, izay tafiditra ao amin'ny lisitry ny New Seven Keazaran'izao tontolo izao, dia iray amin'ireo tsangambato malaza indrindra eto an-tany, saingy mety misy zavatra vitsivitsy tsy fantatrao momba azy io. amin'ny…
Mitety an'i Russia, Ukraine, Belarus izahay
Inona no hatao any Omsk. Rosia
Inona no hatao any Omsk. Russia Contents Ao Rosia, any amin'ny faritra atsimon'i Siberia Andrefana, eo amoron'ny reniranon'i Irtysh sy ny lakandrano havanana, antsoina hoe Om, dia misy tanàna milamina - Omsk. Ho an'ny mipetraka any andrefan'i Siberia, ny safidy mividy trano any Omsk angamba no tena nahaliana. Ho an'ny tanàna dia azo antoka fa mety amin'ny ...
Fitsaharana any Crimea
Mialà sasatra ao anaty votoatin'i Crimea - Crimea! Inona no tonga ao an-tsainao voalohany rehefa mieritreritra ny toerana hampiala-vakananao ianao? Mazava ho azy - Crimea! Inona ny Crimea? Voalohany indrindra, Crimea dia tantara manankarena sy manan-tantara. Genoese, Grika, Tatar, Rosiana, Okrainiana. Midika izany fa misy ny dian-tantara - trano mimanda, trano mimanda, monasitera, ...
Vohitra fialan-tsasatra Dzhubga. Faritra Krasnodar. Rosia
Vohitra fialan-tsasatra Dzhubga. Faritra Krasnodar. Russia Contents Topy topimaso fohy Te-hilaza aminao ny momba ny vohitra Dzhubga fanta-daza aho, na dia tena kely aza izy io. Tsara toerana izy io, eo am-bavan'ny renirano mitovy anarana aminy, izay mikoriana mankamin'ny Ranomasina Mainty. Ary sendra namakivaky ity tanàna ity ireo izay mandeha amin'ny Ranomasina Mainty manaraka ny làlambe M-4, toy ny amin'ny sivana iray. ...
Nosy hafakely 7 any Nusa Tenggara. Lisitry ny atiny ao Indonezia Ny nosy an-jatony miampita atsinanan'i Bali dia fantatra amin'ny anarana hoe Nusa Tenggara, faritra iray any atsinanan'i Indonezia izay lasa toerana fitsangantsanganana malaza ankehitriny. Ny nosy sasany dia mirehareha amin'ireo torapasika tsara tarehy izay manintona ireo mpitsidika ny mpifanila vodirindrina aminy ...
25.09.2020 / rem / Asia, Indonezia, Mandehandeha manodidina an'i Bali / fanehoan-kevitra fandraketana nosy 7 hafahafa any Nusa Tengara. Indonezia tsy misy
Nosy 10 tsara tarehy indrindra eo akaikin'ny lisitry ny votoatiny Bali, fantatra amin'ny anarana hoe Island of the Gods, no toerana fitsangantsanganana malaza indrindra any Indonezia. Mampifangaro tantara tsy mampino amin'ny kolontsaina ara-panahy exotic, Bali dia manana zavatra ho an'ny olona rehetra mitsidika. Ary ny tena zava-dehibe, tena tsara tarehy ilay nosy, manana ny zavatra rehetra avy amin'ny ...
25.09.2020 / rem / Asia, Indonezia, Mandehandeha manodidina an'i Bali / fanehoan-kevitra amin'ny nosy tsara tarehy 10 akaikin'i Bali tsy misy
Ny hotely 10 ambony any Bali Lisitry ny atiny Bali dia tsy isalasalana fa ny safidy tsara indrindra no hipetrahana ao Indonezia. Ny ankamaroan'ny hotely misy teti-bola ao amin'ny nosy dia hita ao Kuta, izay alehan'ny ankamaroan'ny mpizahatany. mifantoka any Nusa Dua, Seminyak ary Ubud. Ny trano fandraisam-bahiny sy hotely Ubud dia mety amin'ny ...
24.09.2020 / rem / Asia, Indonezia, Mandehandeha manodidina an'i Bali / fanehoan-kevitra amin'ireo hotely 10 tsara indrindra any Bali tsy misy
Ny dianay mankany Bali Day 1 Arrival any Denpasar tokony ho tamin'ny 2 hariva. Ny hotely Bali Hyatt anay dia nandefa taxi tamina DRIVER tena sariaka 🙂 ary nitondra fiara nankany Sanur izahay nandritra ny antsasak'adiny .. nankany Bali Hyatt anay. Tianay avy hatrany i Sanur ... sy ireo trano mahafinaritra ireo ary, mazava ho azy, ny toetr'andro mahafinaritra any Bali ...
11.09.2020 / Angel / Asia, Mandehandeha manodidina an'i Bali, Fanamarihana marina / Fanehoankevitra 3 amin'ny diantsika mankany Bali
26.11.2020 / rem / Gresy, Zava-mahaliana / fanehoan-kevitra amin'ny Fahagagana 7 an'ny Gresy fahiny tsy misy
Ny sarivongana 8 lehibe indrindra eto an-tany Lisitry ny votoatiny Sarivongana lehibe namboarina hatramin'ny andro fahagola. Naorin'ny Egyptianina taloha an'ny Fanjakana Taloha, ny Great Sphinx dia 20 metatra (66,34) ny haavony ary mbola mijanona ho iray amin'ireo sarivongana lehibe indrindra eto an-tany. Nandritra izay 30 taona lasa izay, nanatri-maso izao tontolo izao ny fananganana avo kokoa sy lehibe kokoa ...
17.10.2020 / rem / Zava-mahaliana / fanehoan-kevitra amin'ny sarivongana 8 lehibe indrindra eto an-tany tsy misy
Jereo ny lava-bato Ellora taloha any India Lisitry ny atiny Ellora Caves dia iray amin'ireo monasitika be volo indrindra eto an-tany, miorina 30 km (20 kilaometatra) avaratra-avaratra andrefan'ny Aurangabad, akaikin'ny tanànan'i Ellora any India. Ny mpanaraka ny bodisma, hindoisma ary ny jainisma dia nanangana an'io kompleks io teo anelanelan'ny taonjato fahenina sy fahafolo tamin'ny ...
12.10.2020 / rem / Asia, India, mahaliana, Zava-mahaliana / 1 Comment Fandraisana an-tsoratra Jereo ireo lava-bato Ellora taloha any India
02.10.2020 / rem / Belize, Zava-mahaliana, Amerika Avaratra / 1 Comment Ho any amin'ireo toerana manintona mpizahatany 10 any Belize
Lisitry ny votoatiny 10 beanina be any Espana Toerana fialantsasatra malaza any Eropa, malaza amin'ny kolontsaina manankarena sy ny fahitana voajanahary mahavariana i Espana. Manintona ny mpizahatany izay maniry handany fotoana miala sasatra amin'ny masoandro mandritra ny fialan-tsasatry ny fahavaratra ny morontsirak'izy ireo. Ny morontsirak'i Espana, miaraka amoron-dranomasina sy tanimbary marobe, dia miovaova arakaraka ny hatsarany. Avy amoron-dranomasina sahirana ...
30.09.2020 / rem / Eoropa, Zava-mahaliana, Espaina, tora-pasika, Fitsangatsanganana any Eropa / fanehoan-kevitra amin'ny morontsiraka 10 tsara indrindra any Espana tsy misy
6 amin'ireo zavatra manintona indrindra any Frantsa Ny tanànan'ny jiro sy ny Tower Eiffel angano dia nahasarika olona an-tapitrisany tamin'ny hatsaran-tarehiny. Ny sasany amin'ireo mari-toerana any Frantsa dia efa fantatra ihany, fa amin'ny lafiny hafahafa. Raha mitady zavatra eny an-dàlambe ianao, dia tsidiho ny sasany amin'ireo zava-mahatsiravina ...
29.09.2020 / rem / Eoropa, Toerana mampatahotra, Zava-mahaliana, Fitsangatsanganana any Eropa, Frantsa / 1 Comment amin'ny 6 amin'ireo toerana mampihoron-koditra indrindra eto Frantsa
Ny fomba famitahan'izy ireo anay dia tiako hizara ny zavatra niainako tamin'ny fampiasana ny hevitry ny mpanangona hotely Booking, ary koa ny serivisy Google Review. Toy izao no izy. Tamin'ny ririnina (2020) dia nanidina nankany Sri Lanka aho ary nijanona tao amin'ny hotely efa voapetraka. Ny hotely dia nofidina tamim-pitandremana mifototra amin'ny hevitra, sary ary tombana ho an'ny mpitsidika heverina ho tena izy. Ity fampahalalana ity dia azo avy amin'ny ...
12.09.2020 / tantara / Asia, Без рубрики, trano fandraisam-bahiny, Fanamarihana marina / Fanehoankevitra 6 amin'ny lainga rehetra
Tsy nisy rakitra hita.
Zava-mahaliana 12 mahaliana ao Rotorua Novely zelandy
Sarintany iraisan'ny firenena eran'izao tontolo izao
Mampahafantatra anao sari-tany, miaraka amina fizahan-tany fizahan-tany sy zavatra hafa mahaliana sy manan-danja. Ny sarintany dia mifanerasera tanteraka, misy sary sy famaritana manintona, fanampiana karoka maranitra, fanasokajiana SERP ary fitetezana feno... Ireo mpitsidika voasoratra anarana ao amin'ny tranonkala dia afaka mahazo ny fampiasa amin'ny karatra mandroso - manampy ny marika manokana, ny dia, ny zotra ary maro hafa. Eo am-pelatananao koa sari-tany zanabolana, sari-tany avo sy avo lenta, ary sari-tany misy toetr'andro miaraka amin'ny fanohanana mialoha.
Sarintan'izao tontolo izao
Efa feno ny sarintany, miandrasa azafady ...
Ny zava-drehetra momba an'i Thailand
Ny zava-drehetra momba an'i Sri Lanka
Java. Sarintanin'ny fizahan-tany sy torapasika
Momba an'i Vietnam
Sarintany toetran'i Vietnam
Sarintany ankapobeny mahaliana sy torapasika any Singapore
Sarintany ankapobeny mahaliana sy torapasika any India
Sarintanin'ny toetrandro any India + toetrandro
Ny momba an'i India rehetra
Ahoana ny fomba hitsitsiana ny dia an'habakabaka
Misafidy hotely. Tips